I-China elishajekayo Ibhethri Inikwe amandla Sonic Ibhulashi lamazinyo EA315 Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | Charmhome
Ibhulashi lamazinyo kagesi
Ikesi Lebhulashi Lamazinyo Lokuhamba
Sonic Electric isixubho
Rechargeable Ibhethri Inikwe amandla Sonic Ibhulashi lamazinyo EA315
Ama-bristles enziwe ngenayiloni ye-DUPONT, ukwakheka kwe- "W" ukuze ihambisane nokwakheka kwamazinyo ukuhlanzwa ngokuphelele kwezinsini nezindawo okunzima ukufinyelela kuzo. Isaziso: Amakhanda webhulashi azokukhumbuza ukuthi ubeke ikhanda lakho lebhulashi ngokusebenzisa ama-bristles akhombisa okwesibhakabhaka. Ubumnene kusibonisi sakho sezinsini nesibhakabhaka buyafiphala ngombala ukukwazisa uma sekuyisikhathi sokushintsha ikhanda lebhulashi.
Izinto I-ABS, i-PC
Umthombo Wamandla I-DC 5V, Ukushaja i-USB
Uhlobo lwebhethri DC 3.7V, 800mAh Lithium Ibhethri
Ukuvimbela amanzi IPX7
Usayizi womkhiqizo Φ28 * 255mm
Isisindo sengqikithi 100g
Ikhwalithi ephezulu ye-Dupont Nylon 612 bristle.
Izindlela ze-3.5 (ezihlanzekile, eziMhlophe, eziPoland, eziMandla, ezizwelayo) zingakhethwa ukuhlanza izinyo.
Isikhathi semizuzu engu-4.2 nemizuzu engama-30 isikhumbuzi sesikhathi sokuvala
5.Vibration 31000 imivimbo / iminithi
Isikhathi sokusebenza sebhethri sezinsuku eziyi-6.100 ngemuva kokushaja amahora ayi-8-10.
I-7.Upende okhethekile wokubhaka ebusweni ukugwema ukuklwebheka futhi uvele imibala egqamile.
Idizayini yokulawula i-8.Unique ngokwethu, fanisa imoto bese ulondoloza amandla.
Yini isizathu sokuba ukhethe ibhulashi lamazinyo kagesi le-sonic?
Ama-bristles enziwe nge-DUPONT nylon, "W" design design ukuze ivumelane nobunono bamazinyo wokuhlanza kahle izinsini nezindawo okunzima ukufinyelela kuzo. Isaziso: Amakhanda webhulashi azokukhumbuza ukuthi ubeke ikhanda lakho lebhulashi ngokusebenzisa ama-bristles akhombisa okwesibhakabhaka. Ubumnene kusibonisi sakho sezinsini nesibhakabhaka buyafiphala ngombala ukukwazisa uma sekuyisikhathi sokushintsha ikhanda lebhulashi.
Izindlela ezi-2 ezikhethiwe zokuhlanza ibhulashi lamazinyo: Hlanza (mnene), okuMhlophe (okunamandla), isiPolish (imvamisa eguquguqukayo eqinile), i-Milder (imvamisa yokuguqula okuncane) ne-Sensitive (ethambile) ukuze ivumelane nezimo ezahlukahlukene zamazinyo ezinsini, ukuze ukwazi ukukhetha izindlela ezahlukahlukene ngokuya ngokuncamelayo nezincomo zakho zamazinyo.
3.Yakhelwe ku-smart timer control, isikhawu semizuzwana engama-30 esikukhumbuza ukuthi udlulele ku-quadrant elandelayo yomlomo wakho, futhi ngokuphelele ngemizuzu emi-2 (ama-quadrants ama-4), anconywe kakhulu odokotela bamazinyo abangochwepheshe, njengendlela efanele yokuxubha.
Izithombe ezinhle kakhulu zomkhiqizo
Langaphambilini I-2020 entsha efikile ye-Adult Sonic Electric Toothbrush EA312
Olandelayo: I-Ultrasonic Intelligent Okuzenzakalelayo ye-ELectricToothbrush EA350
Electronic Hand Mahhala Ultrasonic Adult okuzenzakalelayo ...
Ultrasonic Intelligent okuzenzakalelayo ELectricToothb ...
Izingane Nezingane Cute Ultrasonic Electric Chil ...
2020 okusha Kufikile Adult Sonic Electric Toothbrus ...
Intelligent Sonic Electronic Ukubuyiselwa Multif ...
Smart 5 izindlela Adult Sonic Electric isixubho E ...
Cha. 301 Wanxiang Road, Furniture Park, Wanquan Industry Base, Pingyang County, Wenzhou Idolobha, Isifundazwe Zhejiang, China